टोखा का’ण्डले लियो नया रुप पतिको ज्या’न लिएर श’व लुकाउन खोजिन्, नसकेपछि दे’ह त्याग गरिन् टोखा घ’ट’ना’मा अर्को खुलासा – Khabar28media
टोखा का’ण्डले लियो नया रुप पतिको ज्या’न लिएर श’व लुकाउन खोजिन्, नसकेपछि दे’ह त्याग गरिन् टोखा घ’ट’ना’मा अर्को खुलासा
January 18, 2021 February 8, 2021 - by admin - LeaveaComment
टोखामा एक ब्यक्तिको ज्या’न लिइएको र एकको देह त्या’गबारे प्रहरी अनुसन्धान जारी छ । उनीहरु दम्पति हुन् जसमध्ये पति ३ महिना मात्र अमेरीकाबाट नेपाल आएका थिए र घ’ट’ना नभएको भए उनी अमेरीका फर्किसकेका हुने थिए ।
टोखामा उमेश केसीको ज्या’न उनकै श्रीमती सुदीक्षाले लिएको निष्कर्षनजिक प्रहरी अ’नु’स’न्धा’न पुगेको पाइएको छ । अ’नु’स’न्धा’न’मा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार सुदिक्षाले आवेशमा आएर पतिको ज्यान लिएको र श’व ब्यवस्थापन गर्ने कोशिस गरेको देखिएको छ ।
यस्तो गर्न सम्भव नभएपछि सुदिक्षाले पनि देह त्या’ग गरेको पाटो तर्फ अनुसन्धान केन्द्रित छ । उमेशको ज्या’न लिएपछि सुदिक्षाले दे’ह त्या’ग गर्दाको समय १० घन्टा बढि भएको पोष्ट मा’र्ट’म रि’पो’र्ट’ले देखाएको छ ।
सुदीक्षाले त्यही योजना साथ आफ्नी दिदीलाई बोलाएको हुनसक्ने ती अधिकारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘उमेशको ह’ ‘त्या भएको कुरा शर्मीलाले बिहीबार नै थाहा पाएर सुदीक्षालाई भेट्न पुगेको हुनपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । नत्र पठाओ प्रयोग गरेर उनी राति त्यहाँ किन पुगिन्? र, पुगेको २ मिनेटमै किन फर्किन्?
त्यो भेटमा सुदीक्षा र शर्मीलाबीच उमेशको श’व व्यवस्थापन गर्ने विषयमै छलफल भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ । बिहीबार राति श’व व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि अन्तिममा सुदीक्षाले दे’ह’त्या’ग गरेको हुन सक्छु, ती अधिकारीले भने ।
उमेशको यस्तो गतिविधिले सुदीक्षाको गर्भमा भएको सन्तान आफ्नो हो वा होइन भन्ने आ’शं’का सुदीपलाई लागेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । सुदिपले ग्राण्डी अस्पतालमा र बि एण्ड बी अस्पतालमा जाँच गराएको भेटिएको छ । ग्राण्डीमा गराएको परिक्षण पछि आएको रि’पो’र्ट’मा उमेशको गो’प्य अं’गले राम्रोसँग काम नगर्ने आ’शं’का गरेको छ।
घ’ट’ना भन्दा केहिदिन अघि पुस १७ गते ग्रान्डी अस्पतालमा उनका श्रीमान उमेशले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गराएको खुलेको छ । त्यसक्रममा उनको लिं,’गले राम्रोसँग काम नगरेको भन्ने सम्बन्धमा पनि चिकित्सकसँग कुराकानी भएको भन्ने स्रोतले बताएको छ ।
घ’ट’नास्थलमा मृ’त’क सुदीक्षाकी दिदी शर्मिला भान्सातर्फको ढोकाबाट प्रवेश गरेको भनिएको विषयमा प्रहरी बढी केन्द्रित भएर अनुसन्धानमा जुटेको थियो। तर शर्मिलाले आफू बिहीबार बिहान ११ बजेतिर बहिनीको कोठामा पुग्दा ढोका लगाएको र भान्सातर्फको ढोका ठेलेर भित्र पस्दा दुवैलाई मृ’त अवस्थामा फेला पारेको अनि आत्तिएर आफू बाहिर निस्किएको बयान दिएकी थिइन ।
तर उनले किन त्यो घ’ट’ना देखेर पनि करिब १० घण्टापछि मात्रै प्रहरीलाई खबर गरिन् भन्ने पनि शं’काको घेरामा छ । आफू आत्तिएर घ’ट’नाबारे जानकारी गराउन नसकेको जिकिर उनको छ । तर प्रहरीले यसलाई सहज रूपमा लिएको छैन । उनलाई कागज गराएर बोलाएका बेला उपस्थित हुने सर्तमा छोडिएको थियो।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल यस घ’ट’ना’का पछाडि चारवटा कारण हुन सक्ने बताउँछन् । ‘घरायसी विवाद, कुराकानीका क्रममा निम्तिने आवेग, सुदीक्षा अमेरिका जान नपाएको र त्यसले निम्त्याउने कटुता, विवाह भएर पनि सन्तान हुन नसकेको र अन्तिममा तेस्रो पक्षको प्रवेश र यसमा उमेश–सुदीक्षालाई सिध्याएर अर्को पक्षले लिएको हुन सक्ने आर्थिक लाभ, यी कारणले घ’ट’ना घटेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानका सबै दायरालाई खुला राखेर तथ्य र प्रमाणमा प्रहरी केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
Previous Article एका बिहानै आयो दु:खद खबर : जीप दु’र्घ’ट’नामा दुईको मृ’त्यु, सात घा’इ’ते ! (हेर्नुहोस् भिडियो सहित)
Next Article धन कमाएर परीवार पाल्ने आशाले मलेशिया पुगेका नरेश राना काे दुखद नि’धन !